ဂိမ်းကုလားထိုင် esports - MEETION
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ဂိမ်းကုလားထိုင် esports.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် MEETION.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် MEETION.
စက်မှုအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင့် Shenzhen Meetion Tech Co. , Ltd. သည်တိကျ။ ထိရောက်သောနည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ရည်ရွယ်သည် ဂိမ်းကုလားထိုင် esports.ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခွင့်များကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။
Meetion Pink စီးရီးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Pink စီးရီးဂိမ်းတည်ဆောက်ခြင်း, ဘယ်လောက်လှပပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြည့်ရတာလဲ
နာမည်ကောင်း, ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးနှင့်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းများပုံမှန်ထုတ်ကုန်များကိုကမ္ဘာ၏အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများသို့တင်ပို့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိလူသိများသောကုမ္ပဏီများနှင့်လူသိများသောကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကောင်းများကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
Meetion RGB အလင်းဂိမ်းကစား Mouse GM19
ပစ္စည်းအမှတ်။ : MT-GM19အမှတ်တံဆိပ်: MEETIONအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်EAN: 6970344731707ဖော်ပြချက်: 6D Soft Touch Gaming Mouse
2019 ခုနှစ်တွင်ဟောင်ကောင်အီလက်ထရောနစ်ပြပွဲအတွက် Meetion အမှတ်တံဆိပ်
2.4G ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်နှင့် mouse combo mini4000
item no ။ : MT-mini4000အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်, အဖြူရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာEan: Black: Black: 69703444731417 White: 69703444731387ဖော်ပြချက် - ရုံးကွန်ပျူတာကြိုးမဲ့မောက်စ်နှင့်ကီးဘုတ် combo
Type C CIRED MK500 နှင့်အတူဖြုတ်ချဖိစီးသော Palmrest RGB စက်ကိရိယာကီးဘုတ်
item no ။ : MT-MK500အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာအတွက်Ean: 69703447320632063ဖော်ပြချက် - ပလပ်ပုခုံးအမျိုးအစား -C cable cable, cablet cablet,4အထူးထိန်းချုပ်မှုသော့များ။Meation အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်ဖြုတ်နိုင်သော Palmrest RGB စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအမျိုးအစား C CISTR500 စက်ရုံ, 10 ခုထက်ပိုသောအသိဉာဏ်ရှိသောဆေးထိုးစက်များနှင့်အတူ
အစစ်အမှန်စက်မှုဂိမ်းကီးဘုတ် TKL MKST MK04
Mk04 TKL စက်ပစ္စည်း keyboard, RGB Backlit, အပြည့်အ0သော့ခလောက်ဆန့်ကျင်ရေး။ RGB Chroma: Backlit စိတ်ကြိုက်။
2.4G ကြိုးမဲ့ mouse လက်ပ်တော့ပ် optical mouse ကို R560
item no ။ : MT-R560အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင် - အနက်ရောင်, အဖြူ, မီးခိုးရောင်, ချောကလက်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာEan: Black: Black: 69703444732452 Chour: 69703444732476 Grey: 69703444732469 Chocolate: 69703447732148ဖော်ပြချက် - အလွန်ကောင်းမွန်သောကြိုးမဲ့ခံနိုင်ရည်, အပြည့်အဝချုပ်ကိုင်, အစွမ်းထက်ထိန်းချုပ်မှု; ပေါ့ပါးသောခန္ဓာကိုယ်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။
USB Computer Optical Wired Mouse Mouse 1600 DPI Mouse M362
item no ။ : MT-M362အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာဖော်ပြချက် - ညှိနှိုင်းနိုင်သော DPI switch, anti-slop ရာဘာ scroll scroll ဘီး, plug နှင့်ကစားပါ။
Mic HP020 နှင့်တွေ့ဆုံသည့် Backlit ဂိမ်းနားကြပ်
ပစ္စည်းအမှတ်။ : MT-HP020အမှတ်တံဆိပ်: MEETIONအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်EAN: 6970344731202ဖော်ပြချက် - သားနားကြပ်ဂိမ်းနားကြပ်
Ultra - ပါးလွှာသောစက်မှုကီးဘုတ် MK80
item no ။ : MT-MK80အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာEan: 69703447311769ဖော်ပြချက်: RGB ရောင်စုံ backlit အပြည့်အဝသော့ထည်ကီးဘုတ်အပြည့်အဝ